Igunya loKwakha lokuKhangela | Martech Zone
NgoMgqibelo, Novemba 19, 2011 NgeCawa, ngo-Novemba 20, 2011 Douglas Karr
Kudala ndixhasa ixesha enjini yokukhangela noun kangangexesha elithile, kodwa amava am kutshanje kunye noMartech ngokunyanisekileyo uluthintele uvuyo lwam. Bendihlala ndicinga ukuba i-SEO yeyona ndlela ikhulayo yokugcwala kuba iyinto onokuyilawula. Kuyinyani ukuya kuthi ga kwinqanaba, kodwa kunokukusa kuphela ukuya kuthi ga kumthamo wokukhangela isihloko esinikiweyo. Ndafumanisa ukuba xa sifikelele kwelona nqanaba liphezulu, iziphumo zihlala zisiba mnandi. Ndiphelelwe lukholo kwinani likaGoogle lokuzibaxa izinto kwaye ndiphulukene nokholo kumzamo ofunekayo ukuze ubekwe ngcono.
Ngaba oko kuthetha ukuba ndiyeke i-SEO? Inqanaba lokuqala endilithathayo kumthengi ngamnye kukuqinisekisa ukuba umxholo wawo ngu eyakhelwe kwiqonga elilungiselelwe, ukuba imixholo yabo imiselwe ngokuchanekileyo, kwaye bayawazi amagama aphambili nokhuphiswano. Into endiyenzileyo ithathiwe nayiphi na inzame eyongezelelweyo kwaye ndiyityhale kwenyuselo kunokuba isebenze. Andithethi ndiqhagamshela ngasemva… okunyaniseka kuphulukana nokubambeka kolu shishino. Ndithetha ngokwazisa umxholo omnandi- kunye okanye ngaphandle kwekhonkco-ngamajelo eendaba kunye nezoluntu.
Inkampani inokubeka amakhulukhulu e-backlinks unyaka wonke kwaye ayenzi ukuba ibe kwinqanaba eliqhuba nasiphi na isithuthi esifanelekileyo. Nangona kunjalo, ukuba inkampani isebenzise isixa esifanayo somzamo ekubhaleni umxholo omangalisayo, ukukhuthaza kunye nokubeka umxholo, sibona ukonyuka okumangalisayo kwinani leendwendwe ezifanelekileyo… kunye namazinga okuguqulwa okulandelayo ngokunjalo. Ingxelo enzulu ngakumbi evela kum yile… ndiyacinga Ukuphuculwa kweinjini yokukhangela sele lishishini elifayo. Ukuba akukho enye into, iintsuku zayo zibaliwe.
Le infographic evela Imilinganiselo emi nkqo Ithetha ngamanyathelo athathwa ziifemu ukwakha igunya lesayithi. Ndingakukhuthaza ukuba ungayihoyi indawo yokukhangela kwaye usebenze ngokulula ekwakheni umxholo omkhulu kwaye uwukhuthaze ngamajelo abawachazayo ukwakha igunya… Ngaphandle kokukhangela!
Intengiso ye-Intanethi by Imilinganiselo emi nkqo.
tags: Igunyaigunya lokwakhaenjini yokukhangela nounulungiselelo lophendloSEO
Umzi mveliso okhulayo wokuBekwa kweMveliso
Novemba 19, 2011 ngo-8: 46 PM
Ndihlala ndimangalisiwe zezinye zezona ndawo zinkulu endikhe ndadibana nazo ezingenayo ibhlog yazo.
Ngokukodwa kumashishini amancinci naphakathi, iiBlogs ziluncedo.
Masithembe ukuba baya kufunda!
Novemba 20, 2011 ngo-2: 17 PM
Kutshanje ndiye ndafunda ukuba ngaphantsi kwe-30 yepesenti yeenkampani enebhlog (ndicinga ukuba isenokuba mbalwa). Kwelinye icala lesikali, malunga neepesenti ezingama-70 zeenkampani zeFortune zinebhlog. Okwangoku iitoni zegumbi leenkampani ezinokubhala umxholo omkhulu ukwenza umahluko kumgca wazo osezantsi.
Nov 22, 2011 kwi-12: 48 AM
Bendihlala ndibhalela umxholo wentengiso yenethiwekhi yoluntu. Iqela lobuchwephesha lifuna i-SEO engakumbi, amagama aphambili (hayi, ibisandula ukwenzeka, kodwa ndiyazi ukuba kutheni ucinga loo nto), ngaphezulu komhla wokuzama ukukhohlisa iinjini zokukhangela.
Isicwangciso sam yayikukudibanisa umxholo omtsha ama-2-4 amaxesha ngeveki, nokuba yayingamagama angama-300 okanye ngamagama angama-3000 awunamsebenzi- eyona nto ibalulekileyo kukuba yayazisiwe, ichaphazelekayo kwaye iyabandakanyeka. Isicwangciso sam yayikukubeka izinto phaya ngaphandle abantu abafuna ukuzihlanganyela.
Into ebuhlungu kukuba besisebenzisa i-CMS yobunini, ke ngoko sasingenayo ibhlog, naluphi na utshintsho lwe-CMS endandilifuna yayingumba wophuhliso, kwaye isiza sasizabalaza ukufumana naluphi na uhlobo lokutsalwa.
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela = Kulungile
Imibutho ebandakanyekileyo ekuhlaleni = Ingcono
Andothusi ukuba iinkampani ezininzi zingenazo iiblogi- abantu babo bezobuchwephesha basaphila ukukhangela kunye nokukhohlisa uGoogle, xa befanele ukuba bajonge kwezentlalo njengendlela yokubandakanya abathengi kunye nabaxumi.
Nov 22, 2011 kwi-1: 51 AM
Yithande! Imibutho Yoluntu> Ukusebenza kweNjini yokukhangela